Ahoana ny fomba fanaovana sary tsara sary avy amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Samy efa niainantsika tamin'ny fotoana iray ny fahatsapana mahasosotra amin'ny fakana sary ny sehatr'asa izay tsy tena manao ny rariny. Eny, na dia marina aza fa tsy misy ny maody famolavolana hahatonga ny sary nalaina tao amin'ny iPhone ho toy ny fahitana azy amin'ny natiora, misy toro-hevitra vitsivitsy azontsika arahana hanatsarana tsara ny kalitaon'ireo sarinay.
Ny ankamaroan'ny smartphone dia manao a SARY tena mahantra amin'ny hazavana maivana ary, na dia eo aza ny sary an-tsary dia tsy hihaona matetika amin'ity "olana" ity isika, antony voalohany tokony hijerena izany. Na izany aza, raha manaraka ny toro-hevitra amin'ity torolàlana tsotra ity ianao, ny sary nalaina tamin'ny iPhone dia hamela mihoatra ny iray amin'ny vavany misokatra.
1 1. Manaova fanakaikezana mahaliana
2 2. Hatsarao ny sarinao miaraka amin'ny tarehin'olombelona
3 3. Tandremo ny lanitra
4 4. Manaova firafitra tsara
5 5. »Ny lalana lava sy mihodinkodina»
6 6. Makà sary HDR
7 7. Famerenana indray
1. Manaova fanakaikezana mahaliana
Ny lesoka lehibe natao tamin'ny sary an-tsehatra dia ny mifantoka manokana any ambadika any, izay takatry ny saina, satria ny ao ambadika matetika no ampahany manandanja indrindra. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny hifantoka bebe kokoa amin'ny mijery ny manodidina antsika.
Amin'ny ankapobeny, rehefa te hanana fomba fijery tsara momba ny tontolo isika, dia mitady toerana izay tsy mahasakana ny fomba fijerintsika, fa rehefa maka sary isika dia tsy maintsy manao ny mifanohitra amin'izay, satria ny sary tsy misy fomba fijery afa-tsy ny tendrombohitra any aoriana no aza tsara loatra.
Tokony ampidirina amin'ny sary foana ny tontolon-kevitra sy ny fomba fijery, manampy singa mifandraika amin'izany eo alohaloha, satria ireo andinindininy ireo ihany no ahafahantsika mamaritra tsara kokoa ny zavatra niainan'io fotoana io. Ny antsipiriany tsotra, toy ny hazo na vato, dia afaka manisy tsy fitoviana.
2. Hatsarao ny sarinao miaraka amin'ny tarehin'olombelona
Na dia tian'ny olona matetika aza ny sarin-tany misy azy ireo mba tsy hisy olombelona, ​​anisan'izany ny olona ao aminy dia afaka manampy refy hafa indraindray. Mazava ho azy fa tsy tiako ny hanana ny sarinay feno mpizahatany, fa ny mpanao ski irery no mankasitraka ny halehiben'ny tendrombohitra, dia mampihetsi-po ny sary.
Amin'ity sary ity isika dia afaka mahita zaridaina iray izay, na dia tena tsara tarehy aza, dia tsy hitantara izany tantara izany raha tsy misy olona mandalo ilay sehatra. Noho izany, olombelona, ​​eny, fa tsy mandeha tafahoatra.
3. Tandremo ny lanitra
Ny iray amin'ireo zavatra tokony hojerentsika dia ny lanitra (raha mikasa ny hampiditra azy io amin'ny famoronana isika). Somary mankaleo ny lanitra madio tanteraka, raha toa kosa ny rahona mampisy dinamika an'ilay sary.
Ankoatr'izay, ny andro be rahona dia mety raha hivoaka haka sary, satria ny masoandro dia tsy hanelingelina be loatra rehefa misafidy ny fomba hakana sary. Rehefa handeha haka sary misy ny lanitra isika dia tsy tokony hisalasala hamela azy hipetraka farafahakeliny roa ampahatelon'ny sary.
4. Manaova firafitra tsara
Tokony hofantarintsika fa marina ny firafitra, noho izany dia tsy maintsy adinontsika ny maka sary haingana fotsiny raha te hahazo valiny tsara isika. Tsy maintsy mijanona isika mba hahitana hoe inona no tsara indrindra ho an'ny sary sy ny zoro idealy ho an'ny sary tsirairay.
Ny singa manan-danja indrindra amin'ny sary dia tokony hapetraka diagonaly, izay handanjalanja ny lanjan'ny elanelan'ny sary. Zava-dehibe tokoa ny tsy mampifantoka ny lanjan'ilay sary amin'ny lafiny iray na zorony fotsiny, satria hahatonga ilay sary tsy hahafinaritra loatra ny fahitana azy.
5. »Ny lalana lava sy mihodinkodina»
Ny iray amin'ireo singa miverimberina sy mahasarika indrindra indrindra amin'ny sary dia ny làlana mankamin'ny halavirana. Ireo lalana ireo dia manome gadona ny sary, manampy fomba fijery ary manasa tsy an-kijanona ny mpijery hanaraka azy ireo. Amin'ny alalàn'izy ireo isika dia afaka manome endrika lalindalina kokoa ny sary ary, ho fanampin'izany, tena tsara izy ireo ho toy ny singa lehibe.
6. Makà sary HDR
HDR na High Dynamic Range (haavo mavitrika avo), dia fomba fakana sary izay manambatra ho azy roa na roa ny fampisehoana iray mitovy amin'ny fampifangaroana azy ireo sy hisafidianana ny fifangaroana tsara indrindra eo amin'ny jiro sy ny aloka. Ity fiasa ity dia afaka manampy antsika indrindra indrindra amin'ny sary miavaka.
Amin'ity sary ity dia azonao jerena tsara ny vokatry ny HDR, satria raha tsy noho izany dia ho fotsy ny lanitra na ny fikosoham-bolo mainty noho ny rasnfo mavitrika be amin'ilay sehatra. Mba hanaovana izany dia azontsika atao ny mampiasa ilay fiasa izay ampidirina ao amin'ny fakantsary iPhone na anaovantsika amin'ny alàlan'ny fampiharana matanjaka sy manam-pahaizana kokoa toa ny Pro HDR.
7. Famerenana indray
Mba hanomezana endrika maha-matihanina kokoa ny sarinay, afaka mampiasa iray amin'ireo rindranasa retouching sary marobe ao amin'ny App Store izahay. Ity sary ity dia efa tsara tarehy toy izao, saingy mety ho tsara kokoa amin'ny fikasihan-tanana vitsivitsy mba hanampiana amin'ny famoahana ireo loko latsaka ao.
Manoro hevitra anao izahay tsy hampiasa rindrambaiko karazana sivana ary hanitsy ny sarinay amin'ny fampiharana toa ny Snapseed, izay manome safidy bebe kokoa ho anay. Ity sary ity dia naverina naverina tamin'ny Snapseed, ny fahasamihafana misy eo amin'izy roa dia tena nahagaga. Ny famerenana tsara dia mety hanova ny sary ratsy ho lasa sary tena tsara.
Ny sary rehetra dia nalain'i Emil Pakarklis avy amin'ny iPhone 4s
Fanazavana fanampiny - Mpaka sary iray an'ny National Geographic dia nitantara ny zavatra niainany tamin'ny fakantsary iPhone 5s
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Torohevitra fito haka sary tsara kokoa avy amin'ny iPhone
Misaotra Tuto compa, tohizo izao ary omeo torohevitra vaovao izahay satria misy zavatra maro tsy fantatro ary nalaiko tany amin'ilay bibidia ilay sary, miaraka amin'ity hazavainao ity fa efa manana fomba tsara kokoa ahafahana maka ny sariko aho , Ankasitrahako ny anjara birikinao ...
Lahatsoratra tsara, iray amin'ireo tena ilaina sy azo ampiharina
Enrique Gonzalez dia hoy izy:
Torohevitra tena tsara. Kintana dimy amin'ity lahatsoratra ity, ankoatry ny tsy mampino ireo sary.
Valiny tamin'i Enrique González
Xradeon dia hoy izy:
Mamaly an'i Xradeon
Rafalillo dia hoy izy:
Isaky ny maka sary momban-tany miaraka amin'ilay iphone aho dia apetrako ny sivana hdr sy chrome,
Avy eo omeko azy io hialana amin'ny rindranasa sary teratany, ilay tsindrona majika, izay manampy amin'ny loko, ary sary maro loko kokoa no mivoaka.
Valiny ho an'i Rafalillo
Ahoana ny fomba hananganana iCloud Keychain amin'ny fitaovanao